Niverina ny ‘Ny Fitafiana’ saingy voaresaka indray ny fanivanana amin’ny televiziona ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Niverina ny ‘Ny Fitafiana’ saingy voaresaka indray ny fanivanana amin'ny televiziona ao Rosia
Voadika ny 02 Janoary 2016 17:52 GMT
Ilay fotoana mampiady hevitra ao amin'ny Tanan-Diamondra. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Niverina ny “The Dress” [Ny Fitafiana]. Na holazainao ho “Dressgate” (raharahan-kenatra ara-pitafiana), #thedress, na zavatra hafa—dia niverina ilay sary namboarina nalaza vetivety. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, dia tsy fitafiana [no olana]. Tsy olana amin'ny fijery ny loko ihany koa, fa olam-pijerena ( na tsy fijerena) aloalo fotsy ao amin'ny sarimihetsika ihany. Ny sarimihetsika lazaina eto dia ny The Diamond Arm, [ny Tanan-Diamondra] tantara sovietika mampihomehy klasika nivoaka tamin'ny 1969 ary efa tsy voaisa intsony ny fotoana nandefasana azy tamin'ny fahitalavitra rosiana.
Ny alina mialoha ny taombaovao dia ny fahitalavi-pirenena Rossiya-1 no farany nandefa ny sarimihetsika, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia maro ireo mpijery nahamarika fa ny aloalo teo ambony lohan'ilay zazalahy tamin'ny sehatra iray fantatra tsara dia tahaka ny voafafa tamin'ny fomba misitery, ny fanafenana ilay marika ara-pivavahana dia heverina ho ezaka hanasivanana hanihany fanimbazimbana fivavahana.
Tao amin'ny tantara ny mpiantsehatra Andrei Mironov no tavela irery tao amin'ny nosy iray ao amin'ny Ranomasina Mainty. Nikorapaka izy ka niantso vonjy, raha nahita tampoka tovolahy iray izay hita ho nandeha ambonin'ny ranomasina. Nafangaron'ilay mpiantsehatra an'i Mironov ho Kristy ilay zazalay, tamin'ny fieritreretana mahita aloalo ambonin'ny lohany. (Rehefa hitany fa nandeha tamin'ny hazo fisaka ambany kelin'ny tsipiky ny rano ilay zazalahy dia nihazakazahany ilay io ary nodoniny hianjera any an-dranomasina.)
Tamin'ny 1 Janoary ny Rossiya-1 mbola nampiseho indray ilay sarimhetsika, ka nitarika tany amin'ny adihevitra tsy voavaha teo amin'ny mpisera Twitter hoe ny toby ve no nanafina ilay aloalo tao amin'ilay sarimihetsika.
Нимб в “Бриллиантовой руке” – это новое “синее платье”. Вот свежие скрины из эфира 1 января pic.twitter.com/EevYVgJtAk
— La Russie parle (@Russia_calls) January 1, 2016
Ny aloalo tao amin'ny Tanan-Diamondra no “fitafiana manga” vaovao. Hamarino anie ireo pikantsary vaovao avy amin'ilay sarimihetsika tamin'ny 1 Janoary.
@Russia_calls Ну реально бред… Вот отрывок из советского варианта https://t.co/9J3U1F0kce @dobriykaban pic.twitter.com/67q7ZMMtmO
— Анжела Клочкова (@AngelKlochkova) January 1, 2016
Oh avelao aho hisento kely. Indro ny rakitra iray avy amin'ny voatra sovietika. [Ambony: “voatra Rossyia-1.” Ambany: “voatra sovietika.”]
Ny harivan'ny 1 Janoary dia nandalo tao amin'ny radio i Victoria Arutiunova, sekreteran'ny VGTRK misahana ny gazety, izay mampihodina ny Rossiya-1, hitsipaka ny filazana fa nanao fanivanana tamin'ny Tanana Diamondra ny tambajotra, nampitandrina fa “tokony hihevitra hisotro kely kokoa sy hihinana bebe kokoa mandritra ny alina iandrasana ny taombaovao ny mpijery mahadinika.”
Na dia nanova ny Tanan-Diamondra aza ny Rossiya-1, dia tsy iny no famafàna voalohany nampiharana sivana tamin'ilay sarimihetsika. Nandritra ny fakana sary tamin'ny 1968, dia nahitana hatsikana sahisahy tamin'ny vaninandrony ilay tantara, tafiditra amin'izany ilay mamolava, tantara nitranga tao amin'ny efitra fandraisambahiny mampiseho vehivavy mitanjaka ampahany, sy ny hafa koa.
Ny tale Leonid Gaidai, araka ny nolazain'ny vady navelany, dia nanampy sehatra manokana ivelan'ny tantara tamin'ny fanisihana fipoahana nokleary tamin'ny faran'ny sarimihetsika, mba hamelana ny mpanao sivana ao amin'ny governemanta hanaisotra azy “tsy satry”, raha voatandrina kosa ny ambin'ny sarimihetsika. Araka ny nolazain'ny vady navelan'ny tale, “Rehefa niasa handresy lahatra an'i Gaidai ry zareo hanaisotra an'io sehatra io, izay tena tsy misy idirany mihitsy amin'ny sarimihetsika, dia adinon'ny [mpanivana] tanteraka ireo tsikera rehefa tany amin'ny faritra hafa.”
Tamin'ny Jona 2013, dia nosoniavin'i Vladimir Putin ho lasa lalàna ireo fanasaziana vaovao noho ny fanimbazimbana ny fihetseham-po ara-pivavahan'ny olona. Araka ny lalàna, ny fanehoana tsy fanajana ny fahatsapan-tena ara-pivavahana dia mety hiafara amin'ny famonjana telo taona.
7 andro izayRosia
4 herinandro izayEoropa Andrefana